သောသီခို: ကေအဲန်ယူနှင့် အစိုးရ တွေ့ဆုံမှု ပွင့်လင်းမြင်သာရန် ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ တောင်းဆို
ကေအဲန်ယူနှင့် အစိုးရ တွေ့ဆုံမှု ပွင့်လင်းမြင်သာရန် ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ တောင်းဆို
ဇွန် ၇ရက်၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်။ နန်းဝေဖြိုးဇာ
အစိုးရနှင့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ)အကြား ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်လိုကြောင်း ပြည်တွင်းပြည်ပ အခြေစိုက် ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၆ဖွဲ့က တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး(KWO)၊ ကရင့်ရေးရာကော်မတီ(KAC)၊ ကရင်လူငယ်များကွန်ယက်(KYN)၊ ကရင့် အမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့(KWEG)၊ သြစတြေးလျား ကရင်အဖွဲ့အစည်း(AKO)နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ မင်နီဆိုတာ ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတို့မှ စုပေါင်း၍ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုလိုက် ခြင်းဖြစ်သည်။
AKO ဥက္ကဌ စောလွင်ဦးက “အဓိက ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တာက ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ပိုရှိ လာအောင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုချင်ရင် တိုင်းရင်းသားအားလုံး လိုလားချက်တွေကို ပိုပြီး ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းပြုလုပ်ဖို့ ပါ။ နောက်ပြီး အစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ လိုလားမှုကို မလိုက်လျောဘဲ ဖိအားပေးပြီး အပေါ်စီးလုပ်တာ တွေ ရှိတဲ့အတွက် အဖွဲ့လိုက်ပေါင်းပြီး အခုလို တောင်းဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ကေအဲန်ယူ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖိုး ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဇွန် ၄ ရက်နှင့် ၅ရက် နေ့က နေပြည်တော်၌ မြန်မာအစိုးရ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်း အပါအ၀င် အခြားအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ တပ်မတော်အရာရှိများ နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် ယခုလို ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကြေညာချက် ထွက်ပေါ်လာခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတိုင်းသည် ပွင့်လင်း မြင်သာမှုရှိ၍ ပြည်သူလူထုအား ချပြအသိပေးရန်၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများသည် လူထုနှင့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည့် အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုများတွင် ပါဝင်ရန်နှင့် တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီ ချက် လက်မှတ်မရေးထိုးမီ ကချင်၊ ရှမ်း၊ တအောင်း(ပလောင်)ဒေသအပါအ၀င် အခြားဒေသများတွင် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ရပ်ဆိုင်းရန် စသည့်အချက်များကို ဖော်ပြထားသည်။
KWO ဥက္ကဌ နန်းဒါးအဲ့ကလယ်က “လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်တာ နှောက်နှေးမှုတွေ ရှိတာကို တွေ့ရတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရွက်ဖို့ တဆင့်ချင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု လုပ်နိုင်မှသာ တိုးတက်မယ်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိရင် ကျမတို့ တိုင်းသူပြည်သား အပေါ် ရိုက်ခတ်လာမှု ရှိလာမယ်။ အဲဒီ ရိုက်ခတ်လာမှုက အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်ရင် လူထုတွေအတွက် အများကြီးနစ်နာမယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
၎င်းအပြင် ကေအဲန်ယူ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖိုး ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဇွန် ၄ရက်နေ့က နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လာမည့် သမ္မတသက်တမ်းအတွက် ဦးသိန်းစိန်အား ဆက်လက် တာဝန်ယူသွားစေလိုကြောင်း ပြောဆိုခဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့များနှင့် တစုံတရာ တိုင်းပင်ညှိနှိုင်းမှုများ မရှိသေးသည့်အတွက် ထိုသို့ မဖြစ်သင့်ကြောင်းလည်း AKO ဥက္ကဌ စောလွင်ဦးက ဖြည့်စွက်ပြောဆိုသည်။
ကေအဲန်ယူနှင့် မြန်မာအစိုးရအကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ၂နှစ်ကျော် ကာလ အတွင်း နှစ်ဖက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ စုပေါင်း၍ ယခုလို စုပေါင်းတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်သည်မှာ ပထမဆုံး အကြိမ်ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
I don't understand who KNU leaders are working for.
The more they have the more they need. They don't concern about the people and ethnic voice. It is better to make an accurate decision before it is too late. They are masking themselves with the KNU and be and thai billion er citizens. Doo Tha Toooth you better take action if you are not clear with the info.